Waxay Toogteen Saaxiibkay Waxayna igu Amreen inaan Cuno Maskaxdiisa
Loading...	Home Maqaallo Waxay Toogteen Saaxiibkay Waxayna igu Amreen inaan Cuno Maskaxdiisa
Waxay Toogteen Saaxiibkay Waxayna igu Amreen inaan Cuno Maskaxdiisa	Thursday, 26 July 2012 01:08	geesguud	Waxaan ahaa baayac mushtare ka ganacsada gadashada iyo sii iibinta lo’da, waxaa isoo wajahay subxa lama dhaafan ah oo ay qaddartu ina kulmisay, waxaa isoo wacay Chemorei waxa uuna igu wargeliyay inuu iibinayo sac kamida lo’diisa oo uu ii sheegay inuu lacag u doonayo si degdeg ah si uu ugu bixiyo lacagta iskoolka (School Fee) Wiilkiisa kaasi oo iskoolka laga soo ceyriyay, sidaasi waxaa yiri Abuubakar Latama oo ka tiiraanyeysan siday Booliisku ula macaamileen. Abuubakar waxa uu sheegay kadib markii uu saaxiibkiis Chemorei guddoonsiiyay lacag dhan SH 8,500 iney isla garteen iney aadaan halka uu ku xirnaa neefka lo’da ah ee ay kala iibsadeen has ahaateen markii ay bilbaabeen iney u jiheystaan xerada uu sacu ku xiran yahay ayaa waxa hakiyay markii ay goobta soo gaareen ciidao ka tirsan booliiska kuwaasi oo hareereeyay dhismaha uu degganaa Chemorei, iyadoona ay markaasi ciidamadu na amreen.
“Waxaa nalgu amray ineynu fariisano, waxyar kadibna aniga waxaa la igu amray inaan madaxa dhulka saaro, iyadoona waxoogaa nala kala sikiyay aniga iyo saaxiibkay”
Abuubakar oo 40 sano jir ah ayaa sheegay iney saraakiisha booliisku weydiiyeen su’aallo badan oo kadeed ah oo ay kamid ahaayeen waxa uu yahay iyo waxyaabaha uu dhismahaasi ka qabanayay.
Waxaan u sheegay inaan ahay baayac mushatare ka shaqeysta kala wareejinta lo’da, isla markaana aan dhismahaasi u imid sidii aan neef lo’a ah uga iibsan lahaa Chemorei.
Kadib Markii ay intaasi ina dhexmartay ayay ciidamadu waxay bilaabeen iney i fatashaan isla markaana waxay si xoog ah iiga qaateen SH 60,000 oo jeebkayga ku jirtay iyagoona markaasi si arxan darro ah jir dil iigu sameeyay.
“Qaar kamida ciidamada ayaa bilaabay iney igu garaacaan baadka qoryahooda, halka kuwa kala ay maroojin ku bilaabeen xubnahayga taranka, ilaa iyo uu dhiig iga yimid meelo badan oo ay kamid tahay xubnita taranka” ayuu ku cataabay Abuubakar.
Muddo markii ay si arxan darro ah ciidamada booliisku u garaacayeen isaga iyo saaxiibkiis ayuu abuubakar sheegay inuu maqlay iyado oo ay ciidamadu saaxiibkiis Chemorei weydiisanayaan furayaal, waxooga yar kadib rasaas socotay muddo 10 daqiiqo ayay oodda kaga qaadeen Chemorei.
“Waxaan markaasi garawsday iney anigana i dilayaan maadaama aan maqlayay amaba aan goob joog u ahaa dilka Chemore waxaase xanuun iyo tiiraanyaba igu reebay hadaladii ugu dambeeyay Chemorei ee uu lahaa way helaan waxay rabeen.
Kadib markii ay xabdu joogsatay ayay ciidamadu igu amreen inaan istaago kadibna waxaan arkay meyda iyo sida arxan darada ah ee saaxiibkay loo diley, waxaan durba arkay iyadoo madixiisa uu kala dhambalmay dhiiga iyo xinjirtuna ay ku daateen goob walba.
Abuubakar waxa uu sheegay in saraakiisha booliisku ay hayeen sabarka amaba dhexda iyagoona markaasi u jiiday halka uu yaallay meydka saaxiibkiis Chemorei.
“Isla markii ay i jiideen ayay igu amreen afka uga leef leefo maskaxdiisa oo kala furnayd maadaama xabado badan ay madaxa uga dhaceen, waxaana kadib ay si naxariis darro ah iigu mareen inaan cunno dhiiga iyo xinjiraha kasoo baxay maskaxdiisa” sidaas waxaa sheegay abuubakar oo ay cabsi badani wajigiisa ka muuqatay.
Kadib waxaan fariistay oo aan ku jilba jabsaday madaxa saaxiibkay Chemorei waxa uuna bilaabay cunitaanka maskaxda saaxiibkiis maadaama ay booliisku ku amreen, balse isagu waxa uu maleynayay in kaliya la oran doono afka uga tirtir balse waxay ciidamdu ka badin waayeen iney cun siiyaan maskaxda saaxiibkiis.
Ma aanan fahmin micahooda ilaa iyo mid kamida ciidamada oo qoriga iga saaray sujuudda iguna yiri waa inaad cuntaa maskaxda” ayuu tilmaamay abuubakar.
Kadibna waxa uu abuubakar bilaabay inuu cunno isagoona sheegay inkastoo lalabo iyo mantag uu qabtay in haddana mar waliba uu soo xasuusanayay qoriga ka saaran madaxa.
Saraakiisha Booliiska ee dhibaatada u geysatay Abuubakar iyo Saaxiibkiis waxay u muuqanayeen kuwa ku dhiiran sameynta falkani, waxayna u muujinayeen dhibanahi caga jugleyn ay ku amrayeen inuu fuliyo waxyaabaha ay u sheegayaan, iyagoona ku amray inuu cuno maskaxda hadii kale sida saaxibkiis ay u tooganayaan.
” Waxay ahayd dahcdo xanuun iyo yaqyaqsi leh, balse maanan lahayn doorasho kale” ayuu ku cataabay isagoo shigshigaya waxa uuna intaasi raaciyay ineysan saraakiisha booliisku intaasi uga harin balse ay sidoo kale ku amreen inuu qaado meydka Chemorei, waxayna igu dareen labo sarkaal oo booliis ah inagoona meydka ku qaadnay Land Rover- qeybta dambe ayaynu saarnay Meydka Chemorei, ayuu raaciyay hadalkiisa.
Abuubakar oo haatan jirdilkii ciidamada ay ka dhigeen Madhaleys ayaa sheegay in sidoo kale lagu amray inuu dadao meydka isagoona markaasi saaray buste si aanan loo arkin.
“Waxay ahayd dhacdo tiiraanyo iyo qalbi jab leh, oo aanan ka dhicin dunida, hase ahaatee markii aynu soo gaarnay saldigga booliiska degmada Kitale ayaa a igu amray inaan ka dego baabuurka, waxaa jirkayga oo dhan ku yaallay dhiig, waxaana u ekaa Cirfiid (Jinni). sidaasi waxaa tilmaamay abuubakar.
Dhacdadaasi kadib nolosha abuubkar way ku soo noqon weysay caadi, waxaana uu noqday mid kaligiis isla hadla, kana fogaaday mihnadiisii shaqo iyo goob waliba oo ay dadku isu yimaadaan.
“Waxaan u maleynayaa dhacdadaasi iney jahwareerisay muuqaalka noloshiisa, mana lahan ninku dareenkii uu lahaa wakhtigaa aynu isguursanay sidaasi waxaa tiri Saujed Ndiema oo ah xaaska 1-aad ee Abuubakar.
Saujed ayaa ah hooyo abuubakar u dhashay 9 caruur ah ayaa sheegtay iney si aada uga tiiranyeysan tahay waxa ku yimid amaba ku dhacay qoyskeeda oo ay sheegtay iney ku jireen nolol qurux badan.
Waxayna hoosta ka xariiqday in marka horeba aysan macquul ahayn in ruux aadane ah lagu amro inuu cuno hilibka ruux kale, waana arinta ugu weyn ee saameynta ku yeelatay nolosheena.
Caruurteeda Xabiib iyo Shaniim waxay sheegeen iney ku rajo weyn yihiin in maalin ay cadaaladu iman doonto, sharcigana la horkeeni doono dadka dhabaatadan u geystay aabahood.
Abuubakar waa uu iska iibiyay inta badan hantidiisii maguurtada ahayd sida xoolihii iyo guryihii si loogu daweeyo loona soo celiyo raganimadiisii, hase ahaatee wali laguma guuleysa in la daweeyo.
Waa Dhacdo Naxdin leh oo ka dhacday Nawaaxiga Degmada Kitale ee Gobolka Rift Valley ee Dalka Kenya-waxayna kamid tahay dhibaatooyinka arxan darro ee ay ciidamadu u gaystaan dadka shacabka ah
Last Updated on Wednesday, 29 August 2012 02:22	Waxaa Cusub